Buy ကား body ပြင် (100,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
ကြည့်သူအရေအတွက်: 233 (+ 1 )
PAD ၁သိန်း – ကား body ပြင်
မိတ်ဆွေတို.ရဲ. ကား body ပိန်နေတာကို
စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်ဖို. ပစ္စည်း အစုံပါဝင်တဲ့
PAD ၁သိန်း တန်လေးကို
Cigarette Lighter အပေါက်နဲ. glue gun
လှည့်ထုတ်ဖို. T ကီး
ကော်တွေ ရှင်းလင်းနိုင်ဖို. ကော်ဖျက်အရည်
အဝါ သုံးချောင်း ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – ၁သိန်း
အမည်: ကား body ပြင်